Kiinura iPhone kubudikidza IMEI panguva yakanakisisa mutengo
Kana iwe uchitsvaga kuti sei kiinura iPhone kubudikidza IMEI nezvose zvivimbiso uye nemutengo wakanakisa, wozviita uine chivimbo cheActualidad iPhone uye LiberaiPhoneIMEI. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kusarudza nyika, mushandisi we iPhone yako uye isa yako IMEI. Kana iwe usingazive opareta wako kana kana yako iPhone ichinzi yakabiwa, iwe zvakare une sevhisi inowanikwa kuti uzviwane
1 Nzira yekuziva iyo IMEI yeiyo iPhone kuti uzarure iyo?
2 How dzokuzarura iPhone kubudikidza IMEI?
Nzira yekuziva iyo IMEI yeiyo iPhone kuti uzarure iyo?
Kune nzira dzakawanda dzichatitendera tsvaga iyo IMEI ye iPhone yedu, kutanga neyakajairika inowanikwa pane chero nhare mbozha. Zvakanakisa nzira dzekutsvaga iyi kodhi Ndizvo zvinotevera:
Kubva pane keypad yenhamba: isu tichazadzisa izvi nekuvhura iyo Foni kunyorera, kubata iyo Keyboard uye kupinda iyo kodhi * # 06 #. Nhamba yacho ichaonekwa pachiratidziri. Kuti tibude, tinobata OK.
Kubva pazvirongwa zve iPhone: isu tinokwanisa kuona yedu IMEI nekuwana maSystem / General / Ruzivo uye kutsvedza pasi kuenda kwatingaverenga IMEI.
Tichitarisa iyo iPhone kesi: iyi inogona kuve iri nzira yakapusa, chero bedzi tine bhokisi padyo. Iyo iPhone IMEI iri pane chinamirwa kumashure uye yakanyorwa senge IMEI / MEID nhamba.
How dzokuzarura iPhone kubudikidza IMEI?
Kiinura iPhone kubudikidza IMEKubva pane sevhisi inopihwa neActualidad iPhone uye LiberaiPhoneIMEI zvaisagona kuve nyore. Maitiro acho angave anotevera:
Isu tinosarudza iyo nyika pakati peSpain, United States kana Mexico nekudzvanya pamatepi ari pamusoro petafura inopa sevhisi.
Kana imwe nyika yasarudzwa, isu tichafanirwa kusarudza opareta mavambo e iPhone yedu. Kana yedu iPhone ichibva kune imwe opareta kana nyika, isu tinobaya pane "VAMWE VANODZIDZISA" uye isu tichakwanisa kuona yakanyanya kuwanda runyorwa rwenyika nevashandisi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mune kesi yeSpain, iwe unogona kusunungura iyo iPhone kubva kune makuru anotakuras senge Vodafone, Orange kana Movistar pakati pevamwe.
Tevere, isu tinopinda iyo IMEI yeiyo iPhone iyo yatinoda kuburitsa mubhokisi pazasi pechinyorwa "Pinda yako IMEI pano."
Isuwo tinofanirwa kuisa email yekuonana mubhokisi pazasi pezvinyorwa «Pinda Email yako pano». Iyo email inozoshandiswa chete uye chete kutizivisa isu kuti iyo iPhone yakatovhurwa.
Tinodzvanya pabhatani reyero kubhadhara iyo sevhisi. Tinogona kusarudza kubhadhara nekadhi rechikwereti kana PayPal.
Kana tangobhadharwa, isu tinongomirira kuti tigamuchire iyo email yekusimbisa mavanotiudza kuti iyo iPhone yaburitswa uye inogona kushandiswa nechero opareta.
Unoona sei, maitiro e kiinura iPhone online Izvo hazvigone kuve nyore. Kana izvo zvaunoda kuziva mutyairi weiyo terminal usati waiburitsa, pano tinotsanangura kuziva sei iyo kambani iri iPhone.